Wasiir Ciro iyo Todoba Maayar iyo Madax kale oo Ugaandha kula kulmay Ardayda Reer Somaliland « SAWNEWS NETWORK
« Sir Fakatay: Haya’dii Inter-peace oo Shirqooladii ay Somaliland La Maaganayd Halkii Ka Sii Wada
Aqoon Kororsi ku Saabsan Xalinta Khilaafaadka oo loo Qabtay Ardayda Dugsiyada Gaarka & Dhalinyarada Ciyaaraha ah ee Borama + Sawiro »
Wasiir Ciro iyo Todoba Maayar iyo Madax kale oo Ugaandha kula kulmay Ardayda Reer Somaliland
Posted by Sawnews.tk on November 4, 2009
Ugaandha,(Sawnews)-Wefti balaadhan oo ah kii noociisa ugu sareeyey oo uu horkacayo wasiirka Arrimaha Gudaha
Jamhuriyada Somaliland Mudane Cabdilahi Ismaaciil Cali ( Cabdilaahi Ciro) ayna weheliyaana 7 maayor iyo agasimaha guud ee wasaarada arimaha gudahu ayaa kulan weyn la yeeshay ardayda Somaliland ee wax ka barata dhamaan jaamacadaha dalkani Uganda. Xafladani oo si heer sare ah ay u soo agaasimeen , unna martiqaadeen ururka ardayda Somaliland ee Uganda, ayaa ka qabsoomtay hoolka shirarka ee jaamacada Kampala International Univerisity.
Hoolka shirarka ayaa ahaa mid ay tiro dhaafiyeen ardayda ka kala timid jaamacadaha kala duwan ee dalkani . Wejiyada ardayda ayaa si weyn looga dheehan karayey farxada iyo qiirada soo dhawanta wefdiga. Ardayda ayaa sacab aad u balaadhan la oogsaday markay iridda hore ee hoolka ay ka soo galeen weftigu.
Qaban qaabada xafladani oo ay soo abaabuleen gudida cusub ee ururka ardayda Somaliland ee Uganda ayaa u muuqatay mid jawi farxadeed iyo rayn rayneedba hadheeyeen. Waa markii ugu horaysay ee wefti heer noocan oo kale ahi ay ardayda ku soo booqdan mid ka mid aha jaamacada ardayda Somaliland wax ku bartaan.
Xaflada ayaa ku bilaabatay jawi wanaagsan, waxaana lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah.Kadib waxaa makaravoonka lagu soo dhaweeyey Mr Xuseen oo ah ku xigeenka jaamacada ADMAS university, isla markaana ah arday wax ka barta jaamacada Kampala International University. Xuseen wuxuu ka war bixiyey fursadaha waxbarasho ee dalkani Uganda. Wuxuu talooyin wax ku ool ah u soo jeediyey weftiga inay fariin ka gaadhsiiyaan shacabka iyo xukuumadaba sidii looga faa’iidaysan lahaa waxbarashada hana qaaday ee dalkani leeyahay mr Xuseen waxa uu ku dheerada sida Jamhuuriyada Somaliland ugu baahantahay inay ka faaidaysato fursadaha Waxbarasho ee yaala dalkan Uganda.
Intaa kadib waxa hadalka lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Ururka Ardayda Somaliland ee Uganda , Mudane Siciid Maxamed X. Cismaan. Gudoomiyahu wuxuu ka waramay maraaxiishii kala duwanayd ee ururku soo maray, guulihii uu ururku gaadhay iyo caqbadaha hor taagan. Wuxuu hoosta ka xariiqay baahid weyn ee loo qabo in ay xukuumadu iyo waalidkuba ka war hayaan ardayda halkani wax ka barata. Sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ku amaanay ardayda dadaalkooda waxbarasho iyo hormoodnimo oo runtii ku tilmaamay mid aad u layaab badan. Gudoomiayah Ururka Ardayda Somaliland waxa uu waftiga warbixin ka siyay Ururka Uganda Somaliland Students Association (USOLSA) oo ah urur ay ku bahooben araday Somaliland ee waxa ka barata dalka Uganda. Ardayda ayaa waftiga ka dalbaday in waxa laga qabto sid ardaydu marka ay dhamaystan waxbarshada sare ay shaqooyin luug aburi laha isla markaan loo dhimi laha dadka ajaanibka ah ee buuxiyay shaqooyinkii ka banan dalka iyo in Dawlada Somaliland ka faaidaysato xiliyada Fasax ardayda si ay si mutadawacnimo ah dalka ugu soo shaqeeyan aqoonti ay barteen.
Waxa isna halkaas ka hadlay Sulub Ismaaciil oo ka mid waalidka firfircoon ee ardayda ka war haya, oo haatan booqasho ku jooga dalkani Uganda ayaa isna muujiyey dareen farxadeed ee uu la wadaago ardayda. Wuxuuna ardayda ku gubaabiyey in dadaalka halkaasi laga sii xoojiyo, Allena lagu xidhnaado.
Cabdiraxman oo ka tirsan masuuliyiinta hayada UN-Habitat ayaa sharaxaad ka bixiyey ulajeedada safarka weftiga. Wuxuu sheegay in weftigu u yimaadeen sidii ay u anba qaadi lahaayey barnaamij ay ku midoobeen shan haydood oo qaramada midoobay ah oo wejigiisii koowaadna dalka ka qabsoomay. Shirkaasi oo lagaga arinsanayo sidii loo horumarin lahaa dawladaha hoose ee dalkeena. Wuxuu masuulku kula dardaarmay ardayda in waqtiga laga faa’iidaysto, loona samro jidka dheer ee waxbarashada.
Agaasimaha Guud ee wasaarada arimaha Gudaha Mr Yuusuf Maxamed Ducaale oo ahaan jiray macalin weyn ayaa hadal macalinimo iyo walidnimo ardya kula dardaarmay kadiban ku soo dhaweeyay Wasiirka Arimaha Gudaha Mr C/laahi Ciro.
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland C/laahi Ismaciil Ciro wuxuu uga horayan u mahadceliyey martiqaadka ay ururka ardayda Somaliland ee wax kabarata Ugandi ay u fidiyeen. Wuxuu ku amaanay guud ahaan ardayda firficoonada ay muujiyeen. Wuxuu Wasiirku ka warbixiyey xaalada guud ee dalka marayo, wacyiga lagu jiro ee heerka amniga ee dalka.
Wasiirku wuxuu sheegay inay la kulmi doonaan inta ay joogaan Uganda Wasiirka dawladaha hoose, Wasiirka Amniga , Taliyaha Guud ee ciidanka bilayska iyo Maayorka magaalada Kampala. Wuxuu wasiirku tilmaamay isagoo daba jooga cabashadii ardayda ee ka haystay baasoorka Somaliland oo ardayda qaar ku yimaadeen dalkani Uganda sidiii ay xukuumadiisu ugu fududayn lahayd. Wuxuu wasiirku ka balan qaaday inta dalka uu joogo inuu kala hadli doono madaxda qaabilsan laanta socdaalka sidii ay fiiro gaar ah ugu yeelan lahaayeen ardayda somaliland , uguna fududayn lahaayeen sidii loo siin lahaa dalku jooga ardaynimo.
Dhinaca kale wasiirku wuxuu ardayda ku booriyey sidii ay cilmiga ay bartaan ugula soo noqon lahaayeen dalka iyo dadkooga si ay ugu anfacaan. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday baahida weyn ee loo qabo sidii ay ardaydu isugu xidhnaan lahayd, una baran lahaayeen maadooyin kala duwan. Sidoo kale isna waxaa halkaasi ereyo waano iyo dardaaran ah ka jeediyey maayorka Hargeysa Eng Xuseen Maxamuud Jiciir oo ardayda uga waramay intu Moyerka ah wixi uu dalka u qabtay gaar ahaan marka uu safarada debda u baxo oo uu dadk kale baro Somaliland waxa kale Md Jiciir ardadya u sheegay inay dawladu hada gacanta ku hayso sidii loo xadidi laha shaqaalaha ajaanibka ah ee aan loo baahnayn,
Wax iusaguna hadalka qaatay Duqa Magaalada Burco Maxmauud Axmed Xasan (Dhago-laab) oo araday kula dar daarmay inay ka faaidaystan wakhtigoodan qaaliga ah,
Duqa Magaalada Berbera Mr Cabdalla Maxamed Carab (San dheere) oo isna Madasha ka hadlay ayaa ardayada kula dar darmay in aanay aqoontoda dalka kala tahriibin ee wxii dalku gashaday ay dib ugu celiyaan
C/raxmaan Shide Bile oo ah Duqa Magaalada Borama ayaa isna sidoo kale ardayda la dardaarmay. Waxa kale oo iyaguna talooyin iyo dardaaran ardayada siiyay Duqa Magaalada Oodweyne. Duqa Magaalada Sheekh iyo Xildhibaan Iimaan oo ka tirsan Golaha Deeganka Ceerigabo isla markaan ah Xildhiibanka ugu da’yar Golaha Degenaka Ceerigabo . Wuxuu u sheegay inuu xidhiidhin doono ururka kulmiya dawladaha hoose iyo ururka ardayda. Xafladu waxay ku soo gebogabowday jawi farxadeed.
Afhayeenka Ururka Ardayda Somaliland ee Uganda
This entry was posted on November 4, 2009 at 11:41 am	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.